Imwe nguva yapfuura, iwe wakagamuchira rubatsiro kumisikidza iyo Firita yemhuri nezvake Nintendo switch wemwanakomana wake. Nenzira iyi iwe waida kudzivirira kupedza nguva yakawandisa nemitambo yemavhidhiyo. Muchokwadi, pamwe neNintendo Shandura kwevabereki kudzora, iwe wakakwanisa kumisikidza yakatarwa chikumbaridzo chemaawa ekutamba pazuva uye zvakare kudzivirira mwana wako kutenga mazita asina kumukodzera muEshop.
Muchidimbu: firita rave chishandiso chinobatsira kwazvo kusvika parizvino. Zvino, zvakadaro, mwanakomana wako akakutendisa kuti anogona kuwirirana kunyangwe pasina zvirambidzo uye anoda kumupa chivimbo chidiki; ndizvozvo chaizvo nei uri kushamisika izvozvi mabviro ekubvisa kwevabereki masimba kubva kuNintendo Chinja. Saka ichokwadi?
Pakadaro, kana mukanditendera, ndinoda kupindura uyu mubvunzo wenyu. Iwe unofanirwa kuziva kuti kubvisa kudzora kwevabereki ibasa chairo uye kana iwe ukatevera rairo dzinowanikwa mugwaro rino, uchazviita pasina matambudziko. Maitiro acho anogona kuitiswa chaiko paconsole, kubva kune yakakosha kunyorera mafoni uye mapiritsi kana kunyangwe kubva paPC, nekuwana marongero eNintendo account. Kana iwe uchida kuziva zvese zvakadzama, ramba uchiverenga.
Maitiro ekubvisa ekudzora kwevabereki paNintendo Shandura
Maitiro ekubvisa ekudzora kwevabereki kuburikidza neapp
Maitiro ekubvisa ekudzora kwevabereki kuburikidza yako Nintendo Akaundi nhoroondo
Kana uine wako Nintendo switch unosvika, unogona kubvisa zvakachengeteka Firita yemhuri kubva pazvirongwa zveconsole, zvinotora chinguva. Ini ndinoratidzira matanho ari pazasi uye ndokuzivisa iwe kuti maitiro acho anoshanda zvakakwana kunyangwe kana yako iri imwe Chinja Lite.
Kutanga kubva Main screen kubva pakoni, famba ne miseve inotungamira kana the chinhu chinotyisa pazasi, sarudza chinhu Masystems (iyo ine chiratidzo chegiya) uye dzvanya bhatani A mutungamiriri. Kubva pano, pfuura nepakati runyorwa rwezvirongwa uye tora pane izvo zvinhu Firita yemhuri mi Chinja marongero ako.
Wobva waisa kodhi yacho Pini sefa ne chinhu chinotyisa. Paunenge iwe uchinge wawana iyo yevabereki ekudzora skrini, tinya iyo kiyi. X kubva kumutungamiriri, kuibvisa zvachose; wobva wadzvanya kiyi A pabhatani kanzura kusimbisa. Unoona here kuti zvaive nyore sei?
Unoti kudii? Ini ndakakanganwa iyo Pini kudzora kwevabereki uye ikozvino wakanamatira nekuti hauzive maitiro ekusetazve? Hapana dambudziko, ini ndichakurumidza kutsanangura maitiro ekuita izvi. Kana iyo koni ikabvunza kodhi Pini, cindezela bhatani + mutungamiriri. Iwe unobva wangoerekana wapihwa a nhamba yekureva- Nyora pasi uye ugare pachiratidziri.
Wobva wavhura chero browser uye shanyira iyi rutsigiro peji yeNintendo saiti uye wobva wadzvanya bhatani Log in. Wobva wadzvanya bhatani zvakare Log in, pinda pasiwedhi and theemail kero kubva kuNintendo account yako uye pakupedzisira pinda bhatani zvakare Log in.
Paunenge iwe watopinda, pinda, muminda yakakodzera, iyo serial nhamba console (iwe unogona kuzviona pachiratidziro icho chakambosiiwa chakavhurika paSwitch, kana neimwe nzira, iwe unogona kuiwana pazasi pomuviri weconsole) uye iyo nhamba yekureva. Mushure meizvozvo, isa iyo kutonga nezve runyerekupe rwe Chivimbiso chikumbiro, pedzisa iyo CAPTCHA uye tinya bhatani Tumira kubvunza.
Muhwindo idzva, pinda pasiwedhi kubva kuNintendo Akaundi yako uye tinya bhatani OK. Panguva ino email yaifanira kunge yakasvika kubva [email inodzivirirwa] (zvakare tsvaga maforodha Tsamba isingadiwe mi Junk mail, kana usingaione ipapo ipapo). Ukangoiwana, vhura uye nyora pasi iyo 8 kodhi kodhi urikuona here. Wobva wadzokera kuSwitch, pinda kiyi A controller nezwi Pinda iyo kodhi huru uye nyora code iwe uchangobva kugamuchirwa neemail. Yakakwana, panguva ino unogona kuseta iyo PIN nyowani yekutonga kwevabereki.
Edza kuzvirangarira (pamwe chengetedza mumaneja wephasiwedi), saka haufanire kudzokorora maitiro ese akaonekwa pamusoro. Kana iwe usisakwanise kuwana yako Nintendo account, unogona kubata rutsigiro rwehofori yeJapan nefoni uye gadzirisazve PIN yako uchishandisa yekupedzisira. Nhamba dzekufona ndidzo800.904924 y er 02.39544999. Vashandisi munogona kubva neMuvhuro kusvika Chishanu kubva 09:00 kusvika 20:00 uye neMugovera kubva 09:00 kusvika 13:00.
Neimwe nzira, iwe unogona kutsanangura dambudziko rako mumunda wakakodzera pazasi peji rino (pinda nyika yako yekugara kutanga kuti utange). Tichakurukura newe neemail nekukurumidza sezvazvinogona.
Ini ndichatsanangura kwauri ikozvino mabviro ekubvisa kwevabereki masimba kubva kuNintendo Chinja uchishandisa chishandiso Nintendo Chinja Mhuri Sefa, inowanikwa pamidziyo Android mi iOS / iPadOS.
Icho chiitiko chakasununguka uye chemahara icho chinokutendera iwe kuti utarise munguva chaiyo kuti ndeapi mazita ari kutambwa paconsole uye kwenguva yakareba sei yaanotambwa. Uye zvakare, nekuda kweichi chishandiso, iwe unogona kuwana ese akajairwa evabereki kudzora mashandiro pane zvinyaradzo: saka, iwe unogona kuseta yakanyanya zuva nezuva yekutamba nguva uye kudzivirira kuwana kune akasiyana zvemukati zvinyorwa nemazita. Kusununguka kwazvo, handiti?
Kana yako iri smartphone kana piritsi Android, kurodha pasi application iri mubvunzo ingovhura peji ino yeGoogle Store uye tinya bhatani Isa pane pc (Kana chitoro cheGoogle chisingawanikwe pane chako kifaa, tarisa dzimwe nzira dzekupedzisira.) Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchishandisa a iPhone kana a iPad, vhura peji rekunyorera muApp Store, tinya, ipapo bhatani Tora / Isa uye simbisa kuzivikanwa kwako kuburikidza Kuzivikanwa kwechiso, kubata id ari pasiwedhi dell'ID Apple (kana zvikumbirwa).
Kuti ubvise firita kuburikidza neapp, iwe unofanirwa kutanga watora pairi switch yako neapp. Kuti uite izvi, ingovhura iyo application Nintendo Chinja Mhuri Sefa uye pinda mukati mako neakaundi nhoroondo yeNintendo (iyo imwe chete inoshandiswa pakoni). Kana iko iko kushanda kwavhurwa, saka, tinya bhatani Pinda kana Gadzira account, iwe unozodzorerwa kune iro rekupinda peji mune browser: pinda iyoemail kero and the pasiwedhi kubva kuNintendo account yako uye pakupedzisira pinda bhatani Log in.
Paunenge iwe wapinda mukati, baya bhatani Sarudza munhu uyu yakaiswa pasi pezita reakaundi yako wobva wadzvanya bhatani OK. Wobva wadzvanya bhatani Pamberi uye uteedzere rairo pachiratidziro kuti upinde kodhi yekodhi pane switch yako uye ubatanidze iyo console.
Kamwe iwo mafaera maviri paanenge akabatana kuburikidza neapp, kudzima zvachose iyo firita, tinya pikicha + iri kumusoro kurudyi kwechiratidziro chikuru chekushandisa. Wobva wadzvanya pane icon I yakaiswa padyo ne zita kubva kunyaradzo yako, wobva wadzvanya pane chinhu Bvisa kwenguva mbiri dzakateerana.
Hukuru! Zvino kana iwe wabatidza switch yako switch, uchaona kuti firita yabviswa zvachose. Kunakidzwa kwakanaka!
Iwe unoda kuziva kana zvichikwanisika kuita mashandiro andakatsanangura muzvikamu zvakapfuura zvakare kubva kubhurawuza? komputa yako pachako kana mumwe smartphone? Mhinduro ndeyokuti; Zvisinei, pane tsananguro inodiwa kuti iitwe: nematurusi aya unogona kubata ako masisitimu eNhoroondo yeNintendo uye nenzira iyi kungotapudza mafirita ane chekuita nekutenga muShop anogona kubviswa. Naizvozvo, iyo firita inongobviswa zvishoma.
Zvakare, ndinofanira kukuyambira kuti iyi nzira inoshanda chete kana yako iri account yakagadzirirwa se Baba ari Anochengeta zviri pamutemo a boka remhuri. Unoti kudii? Kubvisa eShop kurambidzwa ndicho chinhu chete chakakosha kwauri uye chako ndeyeNintendo Parent Akaundi? Zvakanaka, mune iyo kesi ini ndichaenderera mberi kukuratidza maitiro. Kana, pane kudaro, iwe hauzive seiNintendo Mhuri Akaundi Ini ndinokuendesa iwe kune inoenderana peji rekutsigira iyo yepamutemo webhusaiti.
Kuti utange, ingo batanidza kune iyo Akaunti yeNintendo Akaunti peji, pinda yako email kerola pasiwedhi kuverenga uye tinya bhatani Log in. Wobva wadzvanya pane icho chinhu Boka remhuri wobva wasarudza iyo zita re account Yakabatanidzwa kuboka rine firita raunoda kubvisa.
Wobva wadzvanya pane icho chinhu Kudziviswa kushandiswa kwemari muNintendo eShop, tinya pabhokisi riri padyo nechinhu Chengetedza kushandiswa kwemari muNintendo eShop (kubvisa cheki) uye tinya bhatani Sevha shanduko.
Wobva wadzokera kune peji rapfuura uye tinya pane chinhu Zera rinotadzisa Nintendo eShop kutenga. Dzvanya, saka, mubhokisi riri padyo nechinhu Dzivirira Nintendo eShop Kutenga Kubva Pazera (kubvisa cheki) uye pakupedzisira pinda bhatani Sevha shanduko.
Zvaitwa! Iye zvino izvo zvinorambidzwa zvine chekuita nekusefa kutenga muchitoro chaicho cheNintendo zvabviswa zvachose, unofara?
Maitiro ekurodha pasi Photomath paPC